Mogadishu Journal » 2018 » October » 2
Fikrado laga uruuriyey dadka Muqdisho iyo magaalooyin Soomaaliya ah oo aan kalsooni fiican ku qabin madaxda
Mjournal :-Daraasad laga sameeyay lix gobol oo ka tirsan Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedayada ay lumiyeen kalsoonida shacabka. Daraasaddani oo ay sameeyeen hay’adaha Ipsos Limited iyo Farsight Africa Research ayaa muujineysa in 48%...
Gaari qaad u sidey magaalada Jowhar oo lagu weeraray duleedka deegaanka Gololey
Mjournal :-Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegaya in dabley hubeysan ay wadada u galeen gaari noocisu ahaa mini Bus kaasoo qaad u sidey magaalada Jowhar. Gaariga oo ka tegey magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in dabley...
Howlgalka Tababarka Midowga Yurub oo war ka soo gaaray weerarkii is qarxinta ahaa
Mjournal :-Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay Diyaaradaheeda aan duuliyaha laheyn in Duqeyn ay la beegsadeen Saldhig ururka Al-shabaab ay ku leeyihiin degaan ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. War qoraal ah oo ka soo baxay Taliska Mareykanka Afrika (AFRICOM)...
Mareykanka oo sheegay in Duqeyn uu la beegsaday Shabaab
Madaxweyne Gaas oo xil u magacaabay Faraweyne
Mjournal :-Madaxweyne Gaas ayaa Cumar Cabdullaahi Faraweyne u magacaabay Taliyaha Ciidanka Kaydka ah ee Puntland. Wareegtada lagu magacaabay Cumar Faraweyne, waxay u qorantahay sidan:- “Madaxweynaha Dowaldda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay...
Khayre “Waa la isku raacay habka ay u dhaceyso doorashada”
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa wuxuu sheegay in dhinacyada Soomaaliyeed ay isku raaceen habka ay dhaceyso doorashada 2020-ka. Khayre khudbad ka jeedinayay kulanka siyaasadda loo dhan yahay ayaa wuxuu sheegay iyada oo aan la...
Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa soo nooleesay Xiisaha ay u qabto kubadd abuuraha naadiga Tottenham Mousa Dembele. Tababare Luciano Spelleti ayaa taageero weyn u ah hanaanka uu ciyaaro laacibkan reer Belguim waxaana uu doonayaa inuu keeno horyaalka talyaaniga. Mousa...
Mjournal:-Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawsiyo Abuukar Nuur ayaa waxa ay sheegtay in cudurka TP-da uu si weyn fara ba’an ugu hayo dadka Soomaaliyeed ee bukaanka u ah. Waxa ay sheegtay wasiir Fowsiyo oo la hadashay VOA-da daawooyinka laga ganacsado...
Mjournal:-Koox hubeysan ayaa xalay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxa ay ku dileen Saddex qof oo u dhashay Qowmiyadda Oromada, halka ay dhaawaceen Laba kale. Dadka la dilay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa la sheegay inay socoto ku ahaayeen magaalada Boosaaso oo ay...
Sacuudiga oo war ka soo saaaray Ismiidaamintii Talyaaniga lala eegtay
Mjournal :-War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Sacuudiga ayaa waxaa lagu cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay lala eegtay ciidan ka tirsan Midowga Yurub oo u dhashay dalka Talyaaniga. Weerarkan ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii gaari...